FANENDAHANA ETO AN-DRENIVOHITRA : Efa angalarin’ireo mpanendaka ny firavaka “volafotsy”
Ikoizana indray eto an-drenivohitra ny halatra firavaka volafotsy ataon’ireo mpanendaka eto amin’ny manodidina an’Antananarivo ary efa olona maro no niharan’izany, indrindra fa eny amin’ny faritry ny tsenan’Analakely sy eny amin’ny “Petite vitesse”’ no andehanan’ireo mpivezivezy. 25 octobre 2017
Tsy mifidy zavatra angalarina intsony ireo mpangalatra fa izay rehetra manaitra ny maso dia alain’izy ireo avokoa.
Raha ny volamena no fantatra teo aloha fa manintona ireo mpangalatra matetika dia anisan’izany ihany koa ny firavaka volafotsy amin’izao fotoana izao. Marihana fa miroborobo fatratra ny tsenan’ny volafotsy ankehitriny ary betsaka ireo mponina no misafidy ny hanao izany noho ny fahatsarany, etsy andaniny ny fahatahorana manao ireo firavaka volamena saingy atahorana ihany koa anefa amin’izao ny manao volafotsy. Ho porofon’izay mivaingana ny tranga niseho teny amin’ny “Petite vitesse”, ny alatsinainy hariva lasa teo, satria ramatoa iray tao anaty taksibe no rovitra sofina sy naratra mafy vokatry ny fanendahana nahazo azy.
Araka ny fanazavana nomen’ireo mpandeha dia tampoka be ny nisintoman’ireo jiolahy izany ka tsy hita akory ny nitsoahan’izy ireo taorian’izay. Naratra sy nandeha rà ny tratran’ilay ramatoa sy ny sofiny tamin’io fotoana io ary nilaza ny tenany fa volafotsy avokoa no lasan’ireo olon-dratsy. Vao tsy ela koa no nisy seho tahaka izany teny Analakely ka izany no nanaitra ireo mpanara-baovao fa manomboka angalarin’ireto jiolahy koa ny volafotsy ka tokony samy hitandrina daholo mba tsy ho tratry ny fandrobana.
Tsy ny entana fotsiny ihany no lasa fa na ny vatana aza dia maratra vokatry ny fisintomana aton’ireto tsy mataho-tody . Ireo rehetra mailo hatreto no tsy andairany.